Shumacyada Casaanka Salaadda
waxaa maamula 20-05-11
Kahor intaad shumaca shumacaada casaanka ah inaad ku tukatid, waa wax caawimaad leh inaad doorato meel iyo waqti aad ku duceyn karto adigoo aan mashquulin. Waxaad diiradda saari kartaa baryadaada ilaahay, Uurriil, iyo malaa'igta kale ee iftiinka casaanka raadinta xigmadda aad ugu baahan tahay adeegga. U soo ducee inaad awood u yeelato inaad ogaato, horumariso, iyo ...
Sida aan maanta dab ugu shidno laambada shumaca, oo aan u iftiiminno iftiin, aan sidoo kale u soo dejinno dabka jacaylka, xilligan salaadda iyo cibaadada. iyo iftiinkaas iftiinka leh, inagu hareereysan iyo kuwa aan jecel nahay. Waxaan ku siineynaa ...
Waxaan ahay shumac yar oo tufaax ah, kana imanaya Hebei Seawell I / E Co., Ltd. Baraf, oo xidhan hadiyad cas oo Santa Claus ah oo leh riyo iyo farxad farxadeed. Tonal casaan iyo cad, laambad qafiifka Kirismaska, qofku ha dareemo jaceylka gaarka ah iyo macaanku, waa astaan ​​nabadeed iyo farxad; Dhig barnaamijka casaanka ah ...
Shumacyada Santa Claus Tree
Dhanka galbeed, ha ahaato Masiixi, Kirismas si loogu diyaariyo geed Kirismas, si loo kordhiyo farxadda jawiga ciida. Geedka Kirismaska ​​guud ahaan waa la sameeyay, Geedka canabka ah ee Shiine-ka Shiinaha ayaa ah geed waligiis u eg sida astaanta nolosha weligeed ah. Geed lagu qurxiyo nooc kasta oo nalal ah, oo la qurxiyey, la ...
Shumacyada Santa Claus
Santa Claus waa u heellan carruurta wanaagsan ee Ciidda Kirismaska ​​waxay soo bandhigaan tirooyin qarsoon. Legend habeen kasta oo ah Diseembar 24, nin dahsoon ayaa fuuli doona 12 kii lugta lahaa ee uu jiiday reindeer, albaab ilaa albaab ka soo baxa qiiq-qolka guriga, ka dibna si qarsoodi ah hadiyad ugu saaray carruurtooda sariirta th ...
Giriigii hore, dadku waxay caabudaan ilaaha dayax-gacmeedka Artemis. Dabaaldegdeeda sanad-guurada dhalashadeeda, Dadku had iyo goor waxay rabaan in ay dhigaan meesha allabariga ee rootiga malab iyo in badan oo samaynta shumac shumac shidan, si ay u muujiyaan qadarintooda qaaska ah ee ilaaha dayaxa. Goor dambe, iyada oo la marayo ...
Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa sayidku u guuray guri cusub. Waxay soo iibsadeen nalal fara badan iyo shumacyo. Sayidku wuxuu u maleynayaa in laambaddu muhiim tahay, hase yeeshe, markaa sayidku nalka qolka fadhiga, shumaca geli gees gees yar. Iftiin u arag naftaada mid aad u xanuun badan, sidaa darteed laambad: “shumac iyo shumac, yo ...
Shumacyada codka codka beeswax, shumaca beeswax, shumaca codka, shumac shukulaato, shumaca beeswax, shumaca tiirka beeswax,